Fiara fiaran-dalamby Thai ho an'ny marary COVID-19 tsy misy AC na Toilets
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Fiara fiaran-dalamby Thai ho an'ny marary COVID-19 tsy misy AC na Toilets
Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Vaovao isan-karazany
Fiara fiaran-dalamby Thai ho an'ny marary COVID-19
Tsy misy fifehezana rivotra sy fidiovana…. Izany no atrehin'ireo marary COVID-19 asymptomatika rehefa ampidirina ao amin'ny paroasy mitokana izy ireo - fiara fiaran-dalamby niova fo.
Ireo marary COVID-19 any Thailand izay miandry ny fankanesana any amin'ny toeram-pitsaboana dia hitokana amin'ny fiara fiaran-dalamby niova fo.
Io ivon-toerana mitokana io dia hatsangana ao amin'ny tobin'ny fiaran-dalamby ao Bang Sue Grand Station.
Mitohy ny fametrahana ny harato moka sy ny trano fidiovana ivelany ary koa mampifandray ireo kalesy amin'ny herinaratra sy rano.
Ny Bangkok Metropolitan Administration (BMA) sy ny State Railway of Thailand (SRT) dia miasa ankehitriny hanokatra ivon-toerana mitokana ho an'ireo marary COVID-19 ao amin'ny tobin'ny fiaran-dalamby ao Bang Sue Grand Station.
Governora Thailandy Pol. Ny Jeneraly Aswin Kwanmuang dia nilaza fa io toerana io dia ho ivon-toerana alohan'ny fidirana ho an'ny marary COVID-19 asymptomatika ao Bangkok miandry ny fanolorana toeram-pitsaboana.
Misy kalesy fatoriana tsy misy rivotra miisa 15 izay navadika ho paroasy mitokana. Ny kalesy tsirairay dia mahazaka marary hatramin'ny 16, ny fatana ambany ihany no ampiasaina. Ezahina hatao ny fametrahana takelaka moka amin'ny varavarankely, mampifandray ireo kalesy amin'ny tadin'ny herinaratra sy ny rano, ary koa ny fametrahana kabine ivelany.
Nilaza izy fa ity tetik'asa ity dia natolotry ny minisitry ny fitaterana Saksayam Chidchob, izay nibaiko ny State Railway of Thailand sy ny Bangkok Metropolitan Administration mba hiara-manangana trano fitokana-monina marary vaovao.